ဒိုးမယ် - Page4of 39 - နေရာသစ်များကို ရှာဖွေကြပါစို့!
New Opening Places
ပန္းသီးရွာလကာရည္ေသာက္သံုးျခင္းျဖင့္ ရႏုိင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
၅မိနစ္ေလာက္ အခ်ိန္ ေပးျပီး မွန္လို ျကည္လင္တဲ့ အသားေလးရေအာင္ မီးဖိုးေခ်ာင္သံုး ပစၥည္းေလး နဲ႔ ေတြလုပ္ျကမယ္
Sedona Hotel Yangon ရဲ့အီတလီ အစားအေသာက္မ်ားအား ျမည္းစမ္းျခင္း
Fun Fun တုတ္ထိုး ေဟာ့ေပါ့ ရဲ႕ 10 % Discount
စိုင္းခမ္းစမ္ရဲ့ တန္မွတန္ BUY 1 GET 1 FREE ျမန္မာဘီယာ (640ml)
Regional Bistro Bar ရဲ႕ Buy 1 Get 1 ပရိုမိုးရွင္း
ကိုယ်အလေးချိန်အတွက်ရော ကျန်းမာရေးအတွက်ရော အဆင်ပြေတဲ့ ဒိန်ချဉ်လုပ်နည်း
ဒိန်ချဉ်ဆိုရင် မကြိုက်တဲ့လူက ရှားရှားပါးပါးပဲနော်။ အဲ့ဒါကြောင့် ဝိတ်ချချင်တဲ့လူတွေအတွက်လည်း အဆင်ပြေ၊ ကျန်းမာရေးနဲ့လည်း ညီညွတ်တဲ့ ဒိန်ချဉ်လုပ်နည်းလေးကို ပြောပြပေးမယ်လေ.. အိမ်မှာတင် ပါဝင်ပစ္စည်းနည်းနည်းလေးနဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ လုပ်လို့ရတာမို့လို့ စမ်းလုပ်ကြည့်သင့်တဲ့နည်းလေးပေါ့။ ကိုယ်အလေးချိန်အတွက်ရော ကျန်းမာရေးအတွက်ရော အဆင်ပြေတဲ့ ဒိန်ချဉ်လုပ်နည်း ကဲ.. အိမ်မှာ ဒိန်ချဉ်လုပ်စားကြမယ်​လေ။...
လွတ်လပ်ရေးနေ့ပိတ်ရက်မှာ သွားစားသင့်တဲ့ ဆိုင်တချို့
၂၀၂၀ ရဲ့ ပထမဆုံးပိတ်ရက်ကတော့ စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲ စနေနေ့ပါ 😂 ဒါပေမဲ့ လွတ်လပ်ရေးနေ့ဖြစ်တဲ့ ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်နေ့မှာ အိမ်တွင်းမပုန်းမဲ့ foodie တို့အတွက် မြည်းစမ်းကြည့်သင့်တဲ့ စားသောက်ဆိုင်တချို့ကို ရှာတွေ့ထားတယ်နော်! Yang’s Braised Chicken Rice ဒီဆိုင်လေးက...
မကြာခင်မှာပဲ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ကြီးကုန်ဆုံးလို့ ၂၀၂၀ ခုနှစ်ကိုရောက်တော့မယ်ဆိုတော့ ရုံးပိတ်ရက် ကျောင်းပိတ်ရက်မှာ ဘယ်ဆိုင်ကိုသွားကြမလဲ ပလန်ချနေကြပြီလား? ပလန်ချချင်နေပေမဲ့ ဘယ်ကိုသွားလို့သွားရမှန်းမသိဘူးဆိုရင်တော့ ဒီမှာ အလန်းစားပရိုမိုးရှင်းတွေနဲ့ စားသောက်ဆိုင် list ရှိတယ်နော်! အမိုက်စားနှစ်သစ်ပရိုမိုးရှင်းတွေနဲ့ စားသောက်ဆိုင်အချို့ သွားတော့သွားချင်တယ် ဒါပေမဲ့ ဘယ်သွားရမလဲမသိဘူးဖြစ်နေတဲ့...
ကဲ ဒီဇင်ဘာလကတော့ ပွဲတော်တွေဆက်နေတာပဲ။ ခရစ်စမတ်ပြီးတာနဲ့ ကရင်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကလည်း ရှိနေတော့ နှစ်စဥ်နှစ်တိုင်း ကျင်းပနေကျဖြစ်တဲ့ အာလိန်ငါးဆင့်ဘုရားက ကရင်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်အကြောင်းကို ပြောပြပေးရင်းနဲ့ ကရင်အစားအစာအချို့အကြောင်းကိုလည်း ပြောပြပေးမယ်။ အာလိန်ငါးဆင့်ဘုရားမှာ ပြုလုပ်လေ့ရှိတဲ့ကရင်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် မနှစ်ကတော့ ကရင်ရိုးရာနှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကို မင်းဓမ္မလမ်းမှာရှိတဲ့ MCC ရယ်၊ တိုင်းရင်းသားကျေးရွာမှာရယ်၊ အလုံက...
Christmas အတွင်း Discount ချနေတဲ့ ဆိုင်များ
ခရစ်စမတ်ရောက်ပြီဆိုတော့ discount တွေလည်း ချနေပြီနော်.. ခရစ်စမတ်ကာလအတွင်း ဘယ်ဆိုင်ကောင်းကောင်းလေးတွေက ဘယ်လိုအမိုက်စား discount တွေနဲ့ စောင့်ကြိုနေလဲဆိုတာကို ဒိုးမယ်က ရှာထားဖွေထားတယ်။ တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါဦး! ခရစ်စမတ် discount ချနေတဲ့ စားသောက်ဆိုင်မိုက်မိုက်လေးတွေ Discount ဆိုရင်တော့ အထွေအထူး ပြောစရာကိုမလိုဘူး၊...
ကျွန်မတို့နိုင်ငံဟာ မဲခေါင်မြစ်ဝှမ်းဒေသနိုင်ငံများထဲ တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ မဲခေါင်ဒေသနိုင်ငံများထဲမှ ဒီဆောင်းပါးလေးမှာတော့ မြန်မာ၊ လာအို၊ ဗီယက်နမ် နှင့် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတို့မှနာမည်ကြီးအစားအသောက်တစ်ခုစီ အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလေးနိုင်ငံဟာဆိုရင် လည်ပတ်ရတာလည်း လွယ်ကူပြီး အကုန်အကျလည်းသက်သာတာမို့ရွေးချယ်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အောက်မှာဆက်ပြီး ဖတ်ကြည့်ရအောင်နော်။ ၁။ မြန်မာမှ...
ညမိုးချုပ်ကြီးမှ ဗိုက်ဆာတတ်တဲ့အကျင့်ရှိသူများဟာ တစ်ခါတစ်လေမှာ ဒုက္ခများတတ်ကြပါတယ်။ စားချင်တဲ့ အစားအသောက်ကိုရှာဖွေရတာတို့ သွားစားရတာတို့ကအခက်အခဲရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ညလယ်စာ အမြဲပုံမှန်စားလို့ ကြာလာခဲ့ရင် ဆိုးကျိုးတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ အမြန်မဟုတ်ပေမဲ့ တစ်ဖြည်းဖြည်းနှင့် ကြာလာခဲ့ရင် ကျန်းမာရေးကိုပါ ထိခိုက်တဲ့ အထိဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးလေးမှာတော့ ချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ ကျန်းမာရေးကို အလေးထားပြီးတော့...
ကမ္ဘာကြီးမှာ လူဦးရေတိုးပွားလာတာနဲ့အမျှ အစာရေစာရှားပါးမှုတွေကို တချိူ့နေရာတွေမှာ ကြုံတွေ့လာရပါတယ်။ ရှားပါးလာမှုကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက်ကတော့ စားလို့ရတဲ့ ဘယ်အရာကိုမဆို သတ်ဖြတ်ဖျက်ဆီးပြီး စားသောက်ကြတာပါပဲ။ ဒီလိုဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိူးကတော့ သက်ရှိမျိူးစိတ်တွေနည်းပါးရာကနေ ရှားပါးပြီး မျိူးတုန်းတဲ့အထိတွေဖြစ်လာတော့တာပါပဲ။ ဒီအခါမှာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဇီဝစနစ်တွေ ပျက်သုဉ်းကုန်ပြီး ရာသီဥတုဒဏ်တွေကို ခံရတော့တာပါပဲ။...
ကချင်ပြည်နယ်မှာ လည်ရင်းပတ်ရင်း မြည်းစမ်းသင့်တဲ့အစားအစာတွေ…
ခရီးတွေထွက်ရင် ဓာတ်ဖမ်းတာလည်း ဓာတ်ဖမ်းတာပေမဲ့ ဒါလေးတွေ စားခဲ့ပါဦး.. အစားတစ်လိုင်းတို့အတွက် ကချင်ပြည်နယ်ကိုရောက်ရင် မြည်းကြည့်သင့်တဲ့ ဒေသိယအစားအစာတွေနော်… အရင်တုန်းကဆိုရင် ကချင်ပြည်နယ်မှာ ဝါးကိုမီးဖုတ်ပြီးမှ အဲ့ထဲကို ဟင်းထည့်ချက်ကြသတဲ့.. တောင်ပေါ်ဒေသမှာ ပေါများတာက ဝါးဆိုတော့ လွယ်လွယ်ကူကူပဲ အသုံးများတာပေါ့။ ဒါကတော့ ဗဟုသုတပါ.. ကိုယ့်ကိုလည်း...
စျေးတန်ပြီး အရသာမိုက်တဲ့ Fast Food ဆိုင်လေးများ
ဗိုက်ဆာပါတယ်ဆိုမှ မုန့်စားရဖို့အရေး အကြာကြီးစောင့်နေရရင် အဆင်မပြေဘူးလေနော်.. ဒီဆိုင်လေးတွေက fast food သီးသန့်ရောင်းတာလေးတွေ။ ကိုယ့်မျက်စိရှေ့မှာတင် လုပ်ပေးတဲ့ အစားအစာတွေမို့လို့ ပူပူနွေးနွေးတွေချည်းပဲ.. ကဲ ဘာဆိုင်တွေလဲဆိုတော့… ၁။ My Banh Mi ဒါကတော့ နာမည်ကြီးပဲ.. ရန်ကုန်မှာ...
Janggum Korean Food Restaurant
K & K Hot Pot & Spicy Taste
Uncle Tastsu Cake
Tuk Tuk ထိုင်းမြောက်ပိုင်း စားသောက်ဆိုင်
ရန္ကုန္ျမိဳ႕က ေရွာင္လံုးေပါင္း ဆိုင္ေကာင္းေလးတစ္ဆိုင္
ထိုင္းအစားအစာ ခ်စ္သူေတြအတြက္ Nara Thai
အရသာေကာင္းတဲ့ အစားအစာေတြရွိရာ Babett
Organic Spicy (မာလာရွမ္းေကာ)
အသီးအရွက် အသီးအနှံများ၏ အကျိုးအာနိသင်
ချဉ်ငန်စပ် ရှူးရှူးရှဲရှဲ အပ်မှိုသုပ်လေး
Green Tea ကိုပုံမှန်​သောက်မယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုအကျိုး​​ကျေးဇူး​တွေရနိုင်မလဲ??
ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှ LGBT Bars နှင့် Clubs များ
ကခ်င္ ေခါင္ရည္ စစ္စစ္နဲ႕ ကခ်င္အစားအစာ ၾကိဳက္သူတိုင္းအတြက္ ဘြမ္ရွီ
ေက်းလက္ရိုးရာ ထမင္းစားဝိုင္း လြမ္းေနသူေတြအတြက္ ဘူးသီး ေတာဓေလ့ထမင္းဆိုင္
ပထမဦးဆုံး အကြိမ် နိုက်ကလပ်သွားမယ့် သူများအတွက် လမ်းညွှန်
ေစာဖိုးခြားရဲ႕ အိပ္ခ်င္ေျပ ရွဴးရွဲသရက္သီးသုပ္
ကျွန်တော်တို့ ‘ဒိုးမယ်’သည် အများပြည်သူများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အကောင်းဆုံးနေရာများကို ပေါင်းကူးပေးသော ပေါင်းကူးတံတားသဖွယ် ဖြစ်ပါသည်။ အကောင်းဆုံးသော စားသောက်ဆိုင်များ၊ ကော်ဖီဆိုင်များ၊ ဘားများနှင့် ကလပ်များကို သင့်အတွက် ဖော်ပြပေးထားပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ ‘ဒိုးမယ်’ ကို ဒေါင်းလုတ် ပြုလုပ်ပြီး ဒီနေ့ပဲ စတင်အသုံးပြုလိုက်ပါ
Coffee ၏ ကောင်းကျိုးများ
home promo doemal နံနက်စာ restaurant finder yangon DOEMAL BEERFEST Myanmar ညစာ ကော်ဖီ ဟော့ပေါ့ Hot Pot and BBQ ဟင်းချို အသုပ် သီတင်းကျွတ် Doemal Rebate and Redeem food digitalPlatform FoodSearchApp ပီဇာ Promotion Restaurants အသင့်စားအစားအစာ ကျပ်တိုက်ထားသော အသားများ သားသတ်လွတ်အစားအစာများ ဝိုင် မြန်မာ့ရိုးရာအချိုပွဲမုန့်များ အိန္ဒိယဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်အစားအစာများ တရုတ်ကြက်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် အုတ်ဂျုံများ ညနေစာ ဒိန်ချဉ် ကြက်စွပ်ပြုတ် သစ်သီးနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ စပိန်ရိုးရာထမင်းPaella ဘာဂါ ဒိုးနပ် ရေထွက်အစားအစာ နံ့သာအမျိုးမျိုး ရေနွေးကြမ်း စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလှသောအစားအစာများ
Product by code2LAB (Myanmar) Co., Ltd
Copyright © 2017 DoeMal